ललिता निवासको साँढे चार सय कित्ता जग्गा रोक्का गर्यौं, विष्णु पौडेलको छोराले किनेको जग्गा वैधानिक छ ः मन्त्री अर्याल
काठमाडौं, १४ बैशाख । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर हिजोमात्रै रोक्का गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् । शनिबार
खुल्लामञ्चका सटर हटाउन प्रधानमन्त्रीको भूमिका स्वागतयोग्य ः पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान
काठमाडौं, बैशाख १४ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा निर्देशन दिएकोले खुल्ला मञ्चका सटर हटाईएको भन्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, वैशाख १४ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा र अतिक्रमण गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली छानबिन
काठमाडौँ, १४ वैशाख (रासस) ः नयाँ वर्षको शुरुसँगै धितोपत्र बजारमा शेयरको मूल्यमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ । कारोवार रकममा समेत उच्च वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौं, १३ बैशाख । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उपयुक्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी
ज्यो. पं ओजराज उपाध्याय लोहनी । काठमाण्डौं । बैशाख १४ ।२०७६ साल वैशाख १४ गते शनिबार तदनुसार २०१९ अप्रिल २७ तारिख तारिख वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी
नुवाकोट, १३ वैशाख बजार विस्तार गर्न तीव्र रुपमा लागेको एनआइसी एशिया बैंकको जिल्लामा आज दुई शाखा विस्तार गरिएको छ । एनआइसी एशिया बैंकको त्रिशूली शाखा र बेत्रावती
काठमाडौँ, वैशाख १३ । नेपालले बेलायतको राजधानी लण्डनमा आयोजना हुने ‘स्ट्रीट चाइल्ड विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता’ खेल्ने भएको छ ।
काठमाडौं, १३ बैशाख । साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) ले महर्षी अरविन्द फाउण्डेसन र इथिनिक साइन्स फाउण्डेशन (भारतीय गैरसकारी संस्था) सँगको सहकार्यमा यही बैशाख १४
काठमाडौँ, वैशाख १३ । विपद् व्यवस्थापनमा जापानजस्ता देशको अनुभवका आधारमा पाठ सिकी पूर्व तयारी गरिनुपर्ने आवश्यकता औँँल्याइएको छ । राष्ट्रिय
अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नत हुने नेपालको तत्कालको उद्देश्य छः राष्ट्रपति
–विशेष प्रतिनिधि सुरेन्द्रबहादुर नेपाली बेइजिङ, वैशाख १३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको तत्कालको उद्देश्य भएको बताउनुभएको छ ।
तनहुँ, वैशाख १३ । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले सेवाग्राहीको सेवामा विभेद गर्न नहुने बताउनुभएको छ । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशन
सुर्खेत, वैशाख १३ । दिवानसिं र सीता नेपालीको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको आज १२ वर्षभयो । विवाहपश्चात् दुःख गरेर उनीहरुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० सुर्खेत बामेखोला
चितवन, वैशाख १३ । पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कराँते प्रतियोगिता यहाँ हुनेभएको छ । जापान गोजुरियो कराँते डो केन्वाकाई नेपाल सङ्घ चितवन शाखाको आयोजनामा तेस्रो
पूर्वप्रधानमन्त्री अधिकारीको स्मृति दिवस कार्यक्रम
ललितपुर, वैशाख १३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, वामपन्थी दलको एकता र देश विकासमा पु¥याउनुभएको योगदानको
–शेरबहादुर सिंह भीमदत्तनगर, वैशाख १३ । कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिकाकी २० वर्षीया पार्वती चौधरी स्थानीय साहुको घरमा करीब चार वर्ष कम्लरी बस्नुभयो ।
राँझा, वैशाख १३ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला नेतृत्व चयन भएपछि कार्यकर्तामा उत्साह देखिएको छ । जिल्ला नेतृत्व चयनले स्थानीय तहका कमिटीसमेत
चितवन, वैशाख १३ । महाभूकम्प गएका क्षेत्रमा दशौँ वर्षसम्म परकम्पन आइरहने विज्ञले जनाएका छन् । नेपालको भूकम्पीय जोखिम र भूकम्पीयतामा विद्यावारिधि गर्नुभएका प्रा
– कृष्ण न्यौपाने दमौली, वैशाख १३ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले विपन्न घरधुरीको स्वास्थ्य बीमा गराएको छ । आर्थिक रूपमा असहाय परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी
–उमा केसी रोल्पा, वैशाख १३ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै जनताको घरदैलोसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको भए पनि
काठमाडौँ, वैशाख १३ । “अहिले पनि भूकम्पको घर त्यो, मेरो घर यो भनेर अनुदानमा बनेको घरलाई पर र पुरानो घरलाई आफ्नो भनेर देखाउने अवस्था कायमै
बनेपा, वैशाख १३ । भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भूकम्प पुनःनिर्माणको कामले सोचेअनुसार गति लिनसकेको छैन । जिल्लाभरिमा भूकम्पले क्षति
इनरुवा, वैशाख १३ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सुनसरीको अध्यक्षमा भगीरथ खत्वे विजयी भएका छन् । देवकृष्ण यादवलाई २५ मतको अन्तरले पराजित गर्दै अध्यक्षमा
गलकोट, वैशाख १३ : ०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण क्षति पु¥याएको बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका–५ काउलेका १० दलित परिवारलाई एकीकृत
ज्यो. पं ओजराज उपाध्याय लोहनी । काठमाण्डौं । बैशाख १३ ।विक्रम संवत २०७६ साला वैशाख १३ गते शुक्रबार तदनुसार २०१९ अप्रिल २६ तारिख वैशाख कृष्ण पक्ष
Pages 565 : You are at page 312 of 565